Bandhigyada Dalxiiska Caalamiga ah Fasaxyada Dalxiis ee ugu sareeya ee loogu talagalay fasaxyada xusuusta leh
Fasaxyada caalamiga ah marna marna ma aha wax lagu riyoonayo ama la maleynayo; si kastaba ha noqotee. Fasaxyada dibadda waxay u badan tahay xusuusta weligeed ah. Sahaminta aalado fog, isdhexgalka dadweynaha guud ee bulshooyinka kala duwan, qaadashada barashada ku saabsan dhaxalkooda, u socoshada mucjisooyinka manta sameeyey iyo caadooyinka caadi ah, oo ku raaxaysanaya cuntooyinka deegaanka, waa mid cajiib ah. Waxaa jira had iyo jeer wax ay ku suganyihiin in la baaro. Haddii aad ka fekereysey inaad dibedda u baxdo si aad u baratid oo aad u ogaatid bulshooyin kala duwan iyo dhulfadhin, ka dibna ha sugin. Bixiya baalasha naftaada si aad ugu safrto riyadaada. Naftaada u diyaarso nolol maalmeedkaaga, waxaad ka heleysaa heer sare oo cajiib ah iyada oo loo marayo xirmooyinka safarka ee caalamiga ah.Sanduuqa Qumaanka ee Sandbalka wuxuu bixiyaa baayacmushtarro caalami ah oo caalami ah oo khaas ah oo aan shaki ku jirin. Ma aha oo kaliya beddelaad, waxaa sidoo kale lagu siiyaa hoy ku habboon iyo sidoo kale fursado lagu hagayo si aad uugu raaxeysto fasaxaaga ugu sarreeya.
Si aad u bilowdo inaad ku riyootid Safarkaaga Caalamiga ah ee soo socda, waxaan heysanaa baaxad ballaadhan oo ka mid ah xirmooyinka safarka ee caalamiga ah si aad u kala xulato. U oggolow inaanu kuugu adeegno oo kuu fasaxno fasax aad u fiican saaxiibbadaada iyo qoyskaaga.